Kaalinta Aqoonsiga Macluumaadka ee Ganacsiga - Talo-siinta Dib-u-Celinta
Kooxo badan oo xirfadlayaal ah iyo shirkado ayaa isticmaalaya xogta maanta. Waa tiknoolajiyad aad loo tixgeliyo oo lagu hubinayo ka-soo-saaridda xogta websaydhka ee aan habboonayn oo loo beddelayo hab lagu maamuli karo. Tirinta xogta badanaa waxay ku lug leedahay adoo isticmaalaya URL adigoo isticmaalaya robot oo isticmaalaya XPath, CSS, REGEX ama farsamooyinka kale ee ku habboon si loo soo saaro macluumaadka la rabo ee ka socda websaydh. Sidaa daraadeed, waxay si toos ah u ururineysaa macluumaadka ka soo baxa webka.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira xalal fara badan oo isdaba-marin ah - iyada oo laga helayo xalal farsamo oo dhamaystiran oo bedeli kara boggaga oo dhan si loo helo macluumaad habaysan oo nidaamyo nidaamsan oo u baahan dadaal bani aadamnimo - webmail for virtualmin.
Maqnaanshaha macluumaadka ayaa leh codsiyo aan tiro lahayn. Halkan waxaa ah isticmaalka ugu badan ee shabakadda webka ee ganacsiga:
1. Raadinta joogitaanka internetka
Mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee xogta xoqista waa in loo isticmaali karo in lagu uruuriyo ereyada ganacsiga iyo dib u eegista bogagga internetka. Macluumaadka la helay wuxuu caawin karaa qiimeeynta waxqabadka sheyga, fal celinta dadka, iyo habdhaqanka, iwm. Bogagga shabakada waxay liis-garayn karaan oo eegaan tobannaan kun oo qiyaasta isticmaalaha ah iyo dib-u-eegidooda kuwaas oo noqon kara kuwo waxtar u leh falanqaynta ganacsiga.
2. Soo bixinta wax soo saarka iyo qiimaha qiimaha shabakadaha isbarbardhigga
Waxaa jira goobo gaar ah oo shabakad gaar ah oo taraqa iyo xoqidda sicirka alaabta, sharaxa, iyo sawirada si loo helo xogta isbarbardhigga. Xogta laga helay qiimaha waxay ku caawin kartaa sicirka qiimaha, taas oo la cadeeyay inay kor u qaadayso faa'iidada faa'iido leh boqolkiiba halboolo. Ganacsatada warshadaha e-ganacsiga waxay ka faa'iideysan karaan helitaanka macluumaadka la heli karo qalabaynta si loo hubiyo in ay bixiyaan sicirka ugu fiican waqtiga oo dhan.
3. Falanqaynta macaamilka iyo dardargelinta
Tani waxa badanaa lagu sameeyaa joornaalada / website-yada si ay u fahmaan dhagaystayaashooda. Xogta la xoqay ayaa loo isticmaali karaa si loo ogaado habdhaqanka dhagaystayaasha. Kanaalka, tani waxay kaa caawin kartaa inaad si toos ah ugu wargaliso daawadayaasha. Waxa aad ku daawaneyso internetka, tusaale ahaan, waxay ku siinaysaa habdhismeed dabeecadeed oo website-kan uu isticmaali karo si uu u ogaado waxa aad jeceshahay.
4. Maamulida sumcadda internetka
Maanta, shirkadaha ayaa malaayiin ku bixiya kharashka joogtada ah ee internetka, iyo duubista webka ayaa weli ah mid ka mid ah farsamooyinka ugu muhiimsan ee ujeeddadaas. Xogta la xoqay ayaa wax badan ka sheegi kartaa istiraatiijiyada maareynta sumcadda internetka ee kuugu jirta sida ay kaa caawineyso inaad fahamto dhagaystayaasha aad rajeyneyso in ay saameyn ku yeelato iyo sidoo kale aagagga waxyeeleyn kara sumcaddaada. Iyada oo la adeegsan karo shabakada lagu kalsoon yahay, waxaad si sahlan u muujin kartaa hoggaamiyeyaasha ra'yiga, dhaleecaynta qoraalka, mawduucyada raadraaca, iyo qaababka demogaraamada sida da'da iyo jinsiga. Waxaad u isticmaali kartaa macluumaadkan faa'iidadaada.
5. Qaadashada fikradaha been abuurka ah
Ra'yi isbeddel , ama qorista faallooyinka been abuurka ah iyo fikradaha akhristayaasha qaladka ah waxay noqdeen kuwo walaac weyn u leh dadka ku tiirsan aragtida internetka iyo fikradaha ujeedooyin kala duwan. Goobidda shabakada waxay ku caawin kartaa in la kobciyo dib u eegid qoraal ah, xaqiijiyo kuwa dhabta ah, iyo ogaanshaha iyo xannibista khayaanada.
Marka la eego da'da imika ee xogta weyn iyo tartanka sii kordhaya, isticmaalka xogta kaydka waa mid aan dhammaad lahayn. Ganacsigaagu wuxuu ka heli karaa ugu yaraan hal meel oo xogta webka loo isticmaali karo si faa'iido leh. Maqnaanshaha xogtu waa arrin muhiim u ah ganacsiga qarniga 21aad.